Ukusika izikhonkwane | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Ukusika izikhonkwane
Ukusika izikhonkwane kuyinkqubo ebuhlungu futhi enesibopho.
Ingabe ufuna ukukhulisa umuthi we-peach omuhle engadini yakho bese uqoqa izithelo ezihlwabusayo minyaka yonke? Funda ngokucophelela futhi uqaphele lokho esizokutshela khona. Inhloso eyinhloko yokwehlisa zonke izinhlobo ze-peach, kanye nanoma imuphi omunye umuthi wesithelo, ukuqinisekisa ukukhula okufanele kwamagatsha athela izithelo, kanye nokukhula kwezithelo ezinkulu nezinamanzi, ngokulinganayo kusatshalaliswa kuwo wonke umkhiqizo womuthi.
Izici zokupheka izihlahla zentwasahlobo
Ukuze ugweme ukudumala nokudumazeka, ukunakekelwa kwesihlahla esingenasisekelo njengoba ipaki kufanele ibe yisibonelo-okulungile, ngaphandle kokungazinaki izinto ezincane. Ngakho-ke, sicabangela ngokuningiliziwe umsebenzi obaluleke kakhulu - ukusika izikhonkwane, okwenziwa entwasahlobo. I-peach yase-Spring ithambekele ukwakha umqhele wemvelo eduze kwesihlahla, t.
Ukunakekela i-peach entwasahlobo - umsebenzi omele futhi owenza kahle
Umuthi we-peach ungenye yamasiko endala kunazo zonke umuntu azilima. Ekuqaleni, lesi sitshalo sesitshalo sakhula kuphela emazweni afudumele angaphansi komhlaba. Kodwa iminyaka eminingi, amaphikishi asetshalwe futhi akhula nathi. Lokhu kwakungenzeka ngenxa yokuthi izinhlobo ezibandayo zalezi zithelo ezihlwabusayo zavuthwa.
Indlela yokubhekana namaqabunga e-peach ahambisanayo
I-peach yisihlahla sethenda esesabeka iqhwa, izinambuzane ezihlukahlukene futhi, yiqiniso, izifo. Esinye sezinto ezivamile kakhulu futhi esiyingozi kuthiwa i-peach leaf curl. Kuyini, nokuthi ungayibhekana kanjani nayo, ukukutshela ngokulandelayo. Uyazi? Ukusuka lapho i-peach isakazeka kulo lonke izwe, ayikwaziwa ngokwethembeka. Abacwaningi baqaphele ukuthi uPiunus davidiana Franch, ongu-peach okhangayo, otholakala eduze neBeijing (China), usondelene nawo.